သတင်း « YRIC
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၀/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ MRTV မှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါသည်။#MRTV
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၀/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လုပ်ငန်းရှင် များမှ Video Conferencing စနစ်ကို အသုံးပြု၍ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှုကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း(၃)ခု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁) ခုတို့ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများတွင် CMP စနစ်ဖြင့် အဝတ် အထည်အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ သန့်စင် ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ခါးပတ်နှင့်…
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနရှိ သက်ဆိုင်ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံးများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၏ လယ်ယာ၊ သားငါးကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဆောင်ရွက်နေသည့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ၊ သက်ဆိုင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် Covid-19 ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်ကာလ၊ Covid-19 နောက်ပိုင်း ကာလ များတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ လယ်ယာ၊ သားငါးကဏ္ဍများအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ တိုးတက်…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၉/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၉/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လုပ်ငန်းရှင် များမှ Video Conferencing စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှုကဏ္ဍတွင်…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မေလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီးဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးနိုင်မှု အခြေအနေ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၈/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်မေလ ၂၇ရက်နေ့ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လုပ်ငန်းရှင် များမှ Video Conferencing စနစ်ကို အသုံးပြု၍ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှုကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း(၁)ခု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁) ခုတို့ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများတွင် CMP စနစ်ဖြင့် အဝတ်အထည်ချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဆန်ဖြင့်ပြုလုပ်သော မုန့်အမျိုးမျိုး (ဆန်ကွတ်ကီး၊ ဆန်ဘီစကစ်၊ ဆန်ခရက်ကာ စသည်ဖြင့်) ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ အတည်ပြု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်းပမာဏစုစုပေါင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ၄.၈၂၀ သန်း နှင့် မြန်မာကျပ်ငွေ…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌ ဉီးဖြိုးမင်းသိန်း ဦးဆောင်ပြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ကြီးများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ Tsang Yih Co., Ltd. သို့လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဒေါ်မိုးမိုးစုကြည် ဉီးဆောင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ YJ Co., Ltd. သို့ လည်းကောင်း၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းသွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၏ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၇/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်မေလ ၁၃ရက်နေ့ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လုပ်ငန်းရှင် များမှ Video Conferencing စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှုကဏ္ဍ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း(၃)ခုတို့ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများတွင် CMP စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အဝတ်အထည်အမျိုးမျိုးချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ Separating, Sorting, packaging, export and local…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ၁၂ .၅ .၂၀၂၀ ရက်နေ့နံနက် ၁၀ နာရီ အချိန်တွင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ခန်းမ(၃)၌ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်ရုံများ၊ ရပ်ကွက်များ နှင့် တာမွေမြို့နယ်များတွင် ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းကောက် ယူရန်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း Covid – 19 ကြိုတင်ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေး ကော်မတီဝင်များနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ Myanmar Innocook Grain Co., Ltd သို့ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းသွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၏ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဆောင်ရွက်ထားရမည့် အချက်များကို ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများ၊ ခေါက်ဆွဲများ ပုံမှန်လည်ပတ်ထုတ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံခြားတင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်သည့် အချက်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၆/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လုပ်ငန်းရှင် များမှ Video Conferencing စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှုကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နှင့် ဟောင်ကောင် တို့မှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း(၄) ခု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁)ခု တို့ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် လုပ်ငန်း များတွင် CMP စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်အိတ်ချုပ်လုပ်ငန်းများ၊…
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင် Coronavirus disease 2019 (COVID-19) ပျံ့ပွား ကူးစက်လျက်ရှိသောကြောင့် အစိုးရဌာနများအနေဖြင့် ပြည်သူများထံသို့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသည့် လုပ်ငန်းများတွင် လူလူချင်းထိတွေ့မှုများ လျော့ချနိုင်ရေး၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုများအား ကာကွယ်နိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအား ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အစည်းအဝေးများအား COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ကာလအတွင်း Microsoft Team Software အသုံးပြုပြီး Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ တင်ပြချက်များအား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုမိန့်ရရှိပြီး သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းအတည်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏(၅/၂၀၂၀)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၅/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုမိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဉီးဖြိုးမင်းသိန်း သည် ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ SKD, CKD စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး SKD, CKD စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ Refine Leather Goods Co., Ltd , Charis Company Limited နှင့် Myanmar Ao Sheng Leather Goods Co., Ltd. များသို့ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ တွင် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများ၏ အခက်အခဲများနှင့် လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အစည်းအဝေး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၃/၂၀၂၀)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၃/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နှင့် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် စက်မှု ကဏ္ဍ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍ တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင် ၊ Seychelle နှင့် Estonia နိုင်ငံ တို့မှ…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ၏ ၁/၂၀၂၀ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် စက်မှု ကဏ္ဍ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ၊ ဟောင်ကောင် နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ တို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း အတည်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသော ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေးခဲ့ကြပါသည်။
Yangon Investment Forum 2020 ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဉီးဖြိုးမင်းသိန်း သည် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ Myanmar Investors Development Association, နှင့် PwC Myanmar တို့နှင့် Yangon Investment Forum 2020 ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ တင်ပြချက်များ အား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏(၂၁/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၂၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုမိန့်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၂၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၂၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ ၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှု ကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်၊ စင်ကာပူ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဂျာမနီနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ တို့မှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၁၄) ခု တို့ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်းပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉.၁၃၃ သန်း…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ Brothers (Myanmar) Clothing Company Limited၊GuotaiFuhua Garment (Myanmar) Company Limited၊ Hige Fashion Accessories (Myanmar) Company Limited၊Myanmar Full Win Safety Produces Company Limited၊Guang Ming Garment (Myanmar) Company Limited (China)၊Sheng Jie (Myanmar) Clothing Co., Ltd၊Hanson Garment Manufacturing Company Limited ၊Tianjin Fashion Milestone Co., Ltd.များသို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂…
Commerce & Trade Fair Yangon တွင် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီ များ ညွှန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဉီးစီးမှူးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဉီးမျိုးခိုင်ဉီး သည် ရန်ကုန်မြို့ နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သည့် Commerce & Trade Fair Yangon ၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၂၀/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၂၀/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုမိန့်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၉/၂၀၁၉)တွင် အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လုပ်ငန်း ရှင်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ရုံး၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လိုအပ်သည် များကို ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏(၁၉/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၁၉/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုမိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁၉/၂၀၁၉)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၉/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှု ကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ Seychelles တို့မှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၇) ခု တို့ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်းပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇.၈၅၁ သန်း ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစုစုပေါင်း…
Building China-Myanmar Economic Corridor, Promoting Shanghai-Yangon Business and Trade Cooperation Invest in Yangon, Myanmar Seminor တွင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးခိုင်ဦး သည် တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ၂၀၁၉ခုနစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် Building China-Myanmar Economic Corridor, Promoting Shanghai-Yangon Business and Trade Cooperation Invest in Yangon, Myanmar Seminor တွင် Investment Opportunities in Yangon Region ကို တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
“The 2nd China International Import Expo (CIIE) နှင့် Shanghai Sister Cities Cooperation Forum” သို့ တက်ရောက်ခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးခိုင်ဦး သည် တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ မှ ၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် the 2nd China International Import Expo (CIIE) နှင့် Shanghai Sister Cities Cooperation Forumသို့ တက်ရောက်လျက် ရှိပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁၈/၂၀၁၉)တွင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်မီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံပွဲကို၂၀၁၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၃၀ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဖြိုးမင်းသိန်းမှ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ အတည်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခဲ့သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အချက်အလက်များအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၈/၂၀၁၉)အားဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။အဆိုပါမီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲသို့သတင်းမီဒီယာ(၂၂)ခုမှ သတင်းထောက် (၃၅)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသတင်းမှတ်တမ်းရယူခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ တင်ပြချက်များအားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ (၁၈/၂၀၁၉) အစည်းအဝေး
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၈/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် စက်မှု ကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်၊ british Virgin Island နှင့် UK နိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၁၁)…
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း လာရောက်စစ်ဆေးခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း သည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံးသို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၃၀ နာရီတွင် လာရောက်ခဲ့ပြီး ကော်မတီရုံးမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (One Stop Service ) မှ တာဝန်ခံ များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံများမှ ဌာနတစ်ခုချင်း အလိုက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ပေးမှု အခြေအနေတို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မှ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ် လမ်းညွှန်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သည် ကော်မတီရုံးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း လုပ်ငန်း အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်း…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၁၇/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၇/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် စက်မှု ကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်တို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၄)ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၁)ခုတို့ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်း ပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ၃.၉၁၁ သန်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၏ မတည်ငွေရင်းပမာဏ စုစုပေါင်း ကျပ် ၁၂၄၅.၀၀၀ သန်း ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် CMP စနစ်ဖြင့် အိတ်အမျိုးမျိုးနှင့် လက်ကိုင်အိတ် အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အတွင်းရှိ EMC Manufacturing Ltd နှင့် အရက်ပါဝင်ခြင်းမရှိသော အဖျော်ယမကာများနှင့် သောက်ရေသန့်…
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ ဘောဂဗေဒဌာနမှ စီးပွားရေးပညာဘွဲ့ တက်ရောက် နေသော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအား ရုံးလုပ်ငန်းသဘောတရားများကို နားလည်ပြီး အလုပ်ခွင်တွင် အဆင်ပြေစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ရန်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ကောင်းမွန်ရန်စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့လေ့လာရေးသင်တန်းကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တပတ် (၄)ပတ်ကြာ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အမေရိကန်-အာဆီယံစီးပွားရေးကောင်စီဦးဆောင်သော အမေရိကန်ထိပ်သီးကုမ္ပဏီများပါဝင်သည့်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ စီးပွားရေးမစ်ရှင် လာရောက်လျက်ရှိသည့် အမေရိကန်-အာဆီယံစီးပွားရေး ကောင်စီမှ Senior Vice President and Regional Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Michael W. Michalak ဦးဆောင်သော အမေရိကန်ထိပ်သီးကုမ္ပဏီများမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံးသို့ လာရောက်ခဲ့ကြပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr.…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအစည်းအဝေး (၁၆/၂၀၁၉)တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းအတည်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏အမှတ်စဉ်(၁၆/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ တင်ပြသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏အမှတ်စဉ်(၁၆/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ တင်ပြသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ တင်ပြချက်များအားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏(၁၆/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုမိန့်များ ပေးအပ်ခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၆/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်း အဝေးတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုမိန့်များ ပေးအပ်ခဲ့ပါ သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၆/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၆/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှုကဏ္ဍ တွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်၊ British Virgin Islands နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၁၁) ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၂)ခု တို့ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်းပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်…
ဟောင်ကောင်စက်မှုနှင့်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှ The Belt and Road ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ စီးပွားရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးခိုင်ဦးသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ တွင် Pan Pacific Yangon Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဟောင်ကောင်စက်မှု နှင့် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းမှThe Belt and Road ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ စီးပွားရေးနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများအား ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၁၉) တွင် အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အစည်းအဝေး(၁၅/၂၀၁၉)တွင် အတည်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁၅/၂၀၁၉)တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း အတည်ပြုမိန့် ရရှိပြီးသော ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏(၁၅/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုမိန့်များ ပေးအပ်ခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၅/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်း အဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုမိန့်များ ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အစည်းအဝေး(၁၅/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၅/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့နံနက် ၈ ၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှုကဏ္ဍ တွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၆) ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၁)ခုတို့ကို အတည်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်းပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆.၉၅၆ သန်း နှင့် ကျပ် ၃၈၀.၀၀၀ သန်းဖြစ်ပြီး…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏(၁၄/၂၀၁၉)ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၄/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုမိန့်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ တင်ပြချက်များအား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဘွိုင်လာ အသုံးပြုသူ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉ ၀၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးဟံထွန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဘွိုင်လာ အသုံးပြုသည့် ကုမ္ပဏီ ၂၇ ခု တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး စက်ရုံများတွင် ဘွိုင်လာအား အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန်နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာပေး ဆွေးနွေး…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၉) တွင် အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအတည်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသောရင်းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၄/၂၀၁၉)တွင် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း မှ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ အတည်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၄/၂၀၁၉)အား ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲသို့ သတင်းမီဒီယာ(၂၅)ခု မှ သတင်းထောက် (၃၁)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသတင်းမှတ်တမ်းရယူခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် တရုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံပွဲ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်စေရန်နှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၉ : ၀၀ နာရီ၌ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး ဦးဆောင်သော တရုတ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်း များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပိုမိုအဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရေး ပံ့ပိုးပေးမှု ကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Myanmar Insight 2019 ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာခြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဗန်ကောက်မြို့တွင်၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၃ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် Myanmar Insight 2019 ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း ဦးဆောင်၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဒေါ်မိမိခိုင် ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၊ စာရင်းအင်းဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်တွင်း အခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်မြမြဦး နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးခိုင်ဦးပါဝင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၁၃/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၃ ၀၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် စက်မှု ကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ၊ ဟောင်ကောင်နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ တို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၈) ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၁)တို့ကို အတည်ပြု…
JIANGUSUSOHO (MYANMAR) INDUSTRY CO.,LTD. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် CMP စနစ်ဖြင့် အဝတ်အထည် အမျိုးမျိုးချုပ်လုပ် ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ် အတွင်းရှိ JiangusuSoho (Myanmar) Industry Co., Ltd. သို့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးကာ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
HENGRUN GARMENT CO., LTD. သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် CMP စနစ်ဖြင့် အဝတ်အထည် အမျိုးမျိုး ချုပ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ Hengrun Garment Co., Ltd သို့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါ သည်။
SPRING RIVER KNITTING (MYANMAR) CO., LTD သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် CMP စနစ်ဖြင့် သိုးမွေးထည် အမျိုးမျိုး ချုပ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ Spring River Knitting (Myanmar) Co., Ltd သို့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါ သည်။
JINLI KNITTING & SPINNING CO., LTD သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် CMP စနစ်ဖြင့် သိုးမွှေးယက်ထည် အမျိုးမျိုး ချုပ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ Jinli Knitting & Spinning Co., Ltd သို့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်း Daewoo Bus စက်ရုံသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထွန်းနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်ရှိ Daewoo Bus Myanmar စက်ရုံသို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။ Daewoo Bus Myanmar Co., Ltd.သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး ခေတ်မီခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်များ စမ်းသပ်ထုတ်လုပ် နေသည့် စက်ရုံဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့အား Daewoo Bus Myanmar စက်ရုံမှ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်ကျော်အောင်က ခရီးသည်တင် မော်တော်ယာဉ် ၂ မျိုး စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေသည့် အခြေအနေ အား ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်းက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုရရှိစေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ တာဝန်ယူမှု ရှိသော…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း သည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် CMP စနစ်ဖြင့် ဆွယ်တာ အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ် အတွင်းရှိ Wan He Garment Co., Ltdသို့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ လိုအပ်သည် များကို…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁၂/၂၀၁၉)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၁၂/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် စက်မှု ကဏ္ဍတွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ နှင့် ဟောင်ကောင် တို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၆) ခုတို့ကို အတည်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၏…
Jiu Sheng (Myanmar) Knitted Wear Company Limited မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် Jiu Sheng (Myanmar) Knitted Wear Company Limitedမှ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းများတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ လစာပေးမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ကရင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း မှ လာရောက်လေ့လာခြင်း
၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ၏ (၁၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး သို့ ကရင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင် များအသင်း မှ လုပ်ငန်းရှင် ၃၁ ဉီးတို့ လာရောက် လေ့လာခဲ့ပါသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဉီးဖြိုးမင်းသိန်းမှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း
၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံးရှေ့ရှိ ကွန်ကရိလမ်းခင်းနေမှု အခြေအနေအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဉီး လာရောက်စစ်ဆေးခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဉီးအောင်နိုင်ဉီးသည် မြေကွက်အမှတ် ၄၉၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံးနှင့် One Stop Service ရုံးတို့သို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀ နာရီတွင် လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါင်း၄၆၇ ဦး ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း (၅)ခုတို့အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၁၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ အတည်ပြုပေးခဲ့ခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ (၁၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီသည် စက်မှုကဏ္ဍ တွင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ထိုင်ဝမ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဟောင်ကောင်တို့မှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၅)ခုတို့ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်း ပမာဏစုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈.၃၃၂ သန်း ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစုစုပေါင်း(၅)ခုတို့မှ ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း…
“Custom Warehouse Management and Implementation Planning Workshop” သို့ တက်ရောက်ခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးခိုင်ဦး သည် ရန်ကုန်မြို့ Chatrium Hotel တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှ ၅ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် Custom Warehouse Management and Implementation Planning Workshop သို့ တက်ရောက် လျက်ရှိပါသည်။
YIF 2019 ၏ Satisfaction Survey အတွက် ဆွေးနွေးခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော Yangon Investment Forum 2019 ၏ Satisfaction Survey အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးခိုင်ဦးနှင့် လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် အသင်း(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)မှ တာဝန်ရှိသူများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ် အတွင်းရှိ Lucky Fortune Company Limited သို့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ် အတွင်းရှိ P & S Union Group Limited သို့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁၀/၂၀၁၉)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၁၀/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ၀၀နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် စက်မှု ကဏ္ဍ၊ အခြား ဝန်ဆောင်မှု ကဏ္ဍနှင့် အိမ်ယာအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ တို့၌ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၊ ထိုင်ဝမ် နှင့် ဟောင်ကောင် တို့မှ နိုင်ငံခြား…
လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့လေ့လာရေး (Internship) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား
လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့လေ့လာရေး (Internship) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း ၉ ၃၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဉီးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဉီးစီးမှူးရုံး၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဉီးမျိုးခိုင်ဉီး မှ သင်တန်းဆင်းပွဲ အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ၏ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၈/၂၀၁၉) တွင် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် မီဒီယာများ နှင့် တွေ့ဆုံပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း မှ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ အရ အတည်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက် အလက်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၈/၂၀၁၉)အား ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲသို့ သတင်း မီဒီယာ(၁၂)ခု မှ…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၈/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၈/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ ဝဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၉)ခု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း(၃)ခုတို့ကို အတည်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်း ပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅.၈၁၁…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၇/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၇/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀းဝဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၁)ခု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း(၁)ခုတို့ကို အတည်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်း ပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၅၉၉…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ တို့၏ ကမကထဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ Myanmar Investors Development Association(MIDA)နှင့် PricewaterhouseCoopers Co. တို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုတို့ဖြင့် Yangon Investment Forum 2019 ကို Lotte Hotel Yangon ၌ ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ ၁၀ရက် နှင့် ၁၁ ရက်နေ့တို့၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဖိုရမ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိုရမ်သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့်ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် ပြည်ပသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့်…
လုပ်ငန်းရှင်အား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြုမိန့် ပေးအပ်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၈.၅.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၇.၅.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင်​့ အဖွဲ့ဝင်​များသည်ရင်​းနှီးမြှုပ်​နှံသူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင်​့ အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်​တိုင်​းအတွင်​း ရင်​းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး ခဲ့ကြပါတယ်​။ ၆.၅.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏(၇/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏(၇/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်. အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုမိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၆.၅.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၃.၅.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးမှ ကြိုဆိုခြင်း အခမ်းအနား
လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့လေ့လာရေး (Internship ) ဆောင်ရွက်ရန် ရောက်ရှိလာသော စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးမှ ကြိုဆိုခြင်း အခမ်းအနား ၂.၅.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂.၅.၂၀၁၉
Jiu Sheng ( Myanmar ) Knitted Wear Co.,Ltd သို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ နော်ပန်းသဥ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် MIC ၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် CMP စနစ်ဖြင့် သိုးမွေးထည်အမျိုးမျိုး ချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုှုန်ရှိ Jiu Sheng ( Myanmar ) Knitted Wear Co.,Ltd သို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများ၏ အခက်အခဲများနှင့် လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ် ၃၀.၄.၂၀၁၉
Honor Apparel Co.,Ltd သို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ နော်ပန်းသဥ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် CMP စနစ်ဖြင့် အဝတ်အထည် အမျိုးမျိုး ချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ Honor Apparel Co.,Ltd သို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများ၏ အခက်အခဲများနှင့် လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ် ၃၀.၄.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်
အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် လက်တွေ့အသုံးချမှု ဆိုင်ရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲ အစည်းအ၀ေးကျင်းပခြင်း ၂၉.၄.၂၀၁၉
တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်ခြင်း
၂၆. ၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော တိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါင်း ၁,၁၀၀ ကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်မည့်လုပ်ငန်းအား မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှခွင့်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ (၆/ ၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကော်မရှင်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထွန်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့ဝင် (၈)ဦး တက်ရောက်ကြပါသည်။ The meeting approved the project in port and container yard on build, operate and transfer basic from Singapore. The amount of USD 290.124 million has been approved for above projects which will be…
SHWE GON DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်နီလာကျော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မြသူဇာတို့သည် Shwe Gon Development Group Co., Ltd မှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးမင်းဆွေလှိုင် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
CMP လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်၍ ပြည်တွင်းရှိ CMP လုပ်ငန်းများသို့ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောကုမ္ပဏီများ၏ ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းမှု/ ကုန်ချောရောင်းချမှုကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်းနှင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအသင်းတို့မှ တာဝန်ရှိသူများအား ဖိတ်ကြား၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ရပ်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၄:၀၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စ ဆွေးနွေးခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၄.၄.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၅.၄.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၂၄.၄.၂၀၁၉
အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)ကို
အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးတွင် ခြောက်လကြာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိပါတယ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၂.၄.၂၀၁၉
မြန်မာ့ခဲရည်ကျိုနှင့် ခဲသန့်စင်စက်ရုံ(MYSARCO)သို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မှော်ဘီမြို့နယ် မြောင်းတကာစက်မှုဇုန်ရှိ မြန်မာ့ခဲရည်ကျိုနှင့် ခဲသန့်စင်စက်ရုံ(MYSARCO)သို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရာတွင် Dica YangonRegion မှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျိုးမင်းသည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်… ၉.၄.၂၀၁၉.
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင်​့ အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်​တိုင်​းအတွင်​း ရင်​းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး ခဲ့ကြပါတယ်​။ ၁၀.၄.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ (၆/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၆/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀းဝဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၅)ခု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း(၁)ခုတို့ကို အတည်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်း ပမာဏ စုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆.၀၀၈ သန်း နှင့်…
ရန်​ကုန်​ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှုဖိုရမ်​ ၂၀၁၉ ကျင်းပ​ရေးအတွက်​ ဒုတိယအကြိမ်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအ​စည်းအ​ဝေး
ရန်​ကုန်​ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှုဖိုရမ်​ ၂၀၁၉ ကျင်းပ​ရေးအတွက်​ ဒုတိယအကြိမ်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအ​စည်းအ​ဝေး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်​ ၁၀.၄.၂၀၁၉
11.4.2019 ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်း စတုဒီသာ ကျွေးမွေးခြင်းအလှူ
11.4.2019 ရက်နေ့တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး)၏ နှစ်သစ်ကူးအကြိုပရိတ်တရားတော်နာ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှုလုပ်​ငန်းဆိုင်​ရာ ရှင်း လင်းတင်​ပြသည့်အစည်းအ​ဝေးကျင်းပခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှုနှင့် နိုင်​ငံခြား စီးပွားဆက်​သွယ်​​ရေးဝန်​ကြီးရုံး၊ ​နေပြည်​​တော်​၌ ကျင်းပပြုလုပ်​သည့်ရင့်နှီးမြှုပ်​နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်​ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ တိုင်​းဒေသကြီးနှင့် ပြည်​နယ်​ဦးစီးမှူးများက ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှုလုပ်​ငန်းဆိုင်​ရာ ရှင်း လင်းတင်​ပြသည့်အစည်းအ​ဝေးကျင်းပခြင်း
“ Privatisation and Financial Reforms for MSME Development ” သင်တန်းသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံးမှ ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်မိုးမိုးဆွေသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာ- စင်ကာပူ သင်တန်းကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် “ Privatisation and Financial Reforms for MSME Development ” သင်တန်းသို့ တက်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်..
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ နစ်နာမှုဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းမူဝါဒစာတမ်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ
န်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် International Finance Corporation (IFC) တို့ ပူးပေါင်း၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ နစ်နာမှုဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းမူဝါဒစာတမ်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ရက်နေ့တွင် Sule Shangri La Hotel၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မီမီအောင်မှ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်…
သစ်ကိုင်းနှင့် ခြုံနွယ်များ ရှင်းလင်းခြင်း
လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည့်ဝစွာရရှိရေးအတွက် မြို့နယ် လျှပ်စစ်ရုုံးနှင့် ပူးပေါင်းပြီး သစ်ကိုင်းနှင့် ခြဲုနွယ်များ ရှင်းလင်းခြင်း ၇.၄.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၅,၄,၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၅,၄,၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးခိုင်ဦး သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ ၃ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပပြု လုပ်လျက်ရှိသည့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍတွင် နည်းပညာ လွှဲပြောင်း ပေးနိုင်မှု၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် လွှမ်းခြုံမှု တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ သို့ တက်ရောက် လျက်ရှိပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၉.၃.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၈.၃.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် အာဆီယံ-ဂျပန် ဗဟိုဌာနတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ခြင်း မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ Sedona Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဝင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများမှ အရာထမ်းများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်ဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို မြှင့်တင်ခြင်းများကို UN ၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာချုပ်များ၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု နစ်နာမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြဿနာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိ ပညာဗဟုသုတများ…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံး ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ လုပ်ငန်းများ လျင်မြန် လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ပြုစေရန် အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှုးရုံး ဖွင့်လှစ်ပွဲ အခမ်းအနားကို အမှတ် (၄၉)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ဝန်ကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊…
ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sanghwa ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခြင်း
၂၁. ၃. ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ခန်းမ(၃)၌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sanghwa ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်တို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခြင်း
၂၂.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ.တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ(၃)၌ ကျင်းပသော တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်ခြင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၂.၃.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၂၂.၃.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၂၁.၃.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၁.၃.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၉.၃.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင်​့ အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်​တိုင်းအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး ခဲ့ကြပါတယ်​။ ၁၈.၃.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၅/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၅/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀းဝဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်မှုကဏ္ဍတွင် ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၁၀)ခုတို့ကို အတည်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။ အတည်ပြု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၏ မတည်ငွေရင်း…
DICA YANGON REGION ၏ ယနေ့ပုံရိပ်များ
DICA YANGON REGION ၏ ယနေ့ပုံရိပ်များ ၁၈.၃.၂၀၁၉
၁၈.၃.၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၅)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၇)တွင် ဇာထိုးပန်းထိုးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Min Tax (Myanmar Co. Ltd)စက်ရုံသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များသွားရောက် ခဲ့ကြပြီး စက်ရုံတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ စက်ရုံအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြသော ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ စက်ရုံတွင် ဝန်ထမ်း ၂၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး၊ တစ်နှစ်လျင် ထုတ်ကုန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ သန်းခန့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပြီး ပြင်သစ်၊စပိန်၊မက္ကဆီကို နိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၁ နိုင်ငံသို့ တင်ပို့လျက်ရှိပါသည်။
လင်းလင်းထူးကုမ္ပဏီနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၁၈.၃.၂၀၁၉
Treasure Top One co. ltd နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
Treasure Top One co. ltd နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၁၈.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၅.၃.၂၀၁၉
ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဒေသထွက်ကုန်ပြပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ နှင့် ၁၇ ရက်နေ့တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ ( Myanmar Convention Center-MCC) တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ပြပွဲသည် ချင်းပြည်နယ် အတွင်း ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်ရန်၊ အလားအလာရှိသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူများအကြား ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကို ဖန်တီးနိုင်ရန်နှင့် ချင်းပြည်နယ်၏ စီးပွားရေး ပိုမိုတိုးမြှင့်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြပွဲတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအကြား ချိတ်ဆက် ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ ဒေသထွက်ကုန် များပြသခြင်း စသည့် အစီအစဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။ ပြပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွား…
Yangon Investment Forum 2019 ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း
Yangon Investment Forum 2019 ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက် အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ (၄)တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်… ၁၄.၃.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် ၁၄.၃.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် ၁၃.၃.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၇.၃.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင်​့ အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်​တိုင်​းအတွင်​း ရင်​းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး ခဲ့ကြပါတယ်​။ ၆.၃.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ(၄/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၄/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀းဝဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်မှုကဏ္ဍ ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၁၂)ခု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း(၁)ခုတို့ကို အတည်ပြု ပေးခဲ့ပါသည်။…
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၅.၃.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်များအား ရန်​ကုန်​တိုင်​း​ဒေသကြီး ရင်​းနှီးမြှုပ်​နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြုမိန့်များ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်… ၅.၃.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် မြောက်ဥက္ကလာပ စက်မှုှုဇုန်နှင့် ရွှေပေါက်ကံစက်မှုှုဇုန် ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စက်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် Dicayangonregion မှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျိုးမင်းသည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် ၁.၃.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁.၃.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၁.၃.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် တောင်ဥက္ကလာပစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စက်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် Dicayangonregion မှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျိုးမင်းသည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်… ၂၈.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ၄/၂၀၁၉ ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၏ (၄/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းများဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၆၁) တွင် အဆင့် ၃ ရရှိခဲ့သော ကချင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးမှ စာရင်းကိုင်(၄) ဒေါ်ဂျီခေါမျှော်အား ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့် ဂုဏ်ပြုဆု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး လက်စွဲစာအုပ်အား မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုပေးခဲ့သည့် ဘာသာပြန်အဖွဲ့တို့ကို ဂုဏ်ပြုဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၂၈.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၈.၂.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၂၇.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၇.၂.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ဒဂုံအရှေ့စက်မှုဇုန်နှင့် တောင်ဥက္ကလာပစက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စက်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် Dicayangonregion မှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျိုးမင်းသည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်… ၂၅.၂.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၂၆.၂.၂၀၁၉
Yangon Metropolitan Development Public co., ltd ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်း ၂၄.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၅.၂.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ Dagon Arr Mahn Thit Company Limited, Vivo Power Myanmar Company Limited, Yangon XieHui Shoes Industry Company Limited နှင့် Xin Mei Ya Company Limited များသို့ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး…
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၂.၂.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ အတည်ပြုမိန့်စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း နှင့် ပတ်​သက်​ပြီး ဌာနတွင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်​ခဲ့ပါသည်​။ ၂၁.၂.၂၀၁၉
န်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် သာကေတမြို့နယ်စက်မှုဇုန်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စက်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာတွင် Dicayangonregion မှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးမျိုးမင်းသည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်… ၂၁.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၁.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၀.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၉.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၈.၂.၂၀၁၉
(၅၉)ကြိမ်မြောက်မဟာဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား အပြီး ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ တွင် Dicayangonregion မှ ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ၁၅.၂.၂၀၁၉
OSS လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း ၁၄.၂.၂၀၁၉
YRIC 3/19 အစည်းအဝေး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုမိန့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ YRIC 2/19 အစည်းအဝေး တွင်တင်ပြခဲ့သည့် လျောက်ထားလွှာများအပေါ်ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်တွင် တွေ့ရှိရသည့်အားနဲချက်၊အားသာချက်များအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံအရာရှိများနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၄.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၄.၂.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၁၄.၂.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်​တိုင်းအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး ခဲ့ကြပါတယ်​။ ၁၃.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏(၃/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၃/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁၃းဝဝ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီသည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စက်မှုကဏ္ဍနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍတို့၌ ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း (၁၀)ခု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း(၁)ခုတို့ကို…
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၁.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၈.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၇.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၅.၂.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၄.၂.၂၀၁၉
TEAM WORK MAKES THE DREAM WORK. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအဖွဲ့
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်) ၌ လိုအပ်လျက်ရှိသော လူနာကုတင် ၁၃၆ လုံးအား ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ
တာ၀န်ခံမှုနှင့် တာ၀န်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာစေရေးရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၀န်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဦးဆောင်၍ နိုင်ငံခြားနှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီများပါ၀င်သည့် အဖွဲ့သည် လူမှုအကျိုးပြု အစီအစဥ်အနေဖြင့် နှစ်ဦးလှူဒါန်းပွဲအား ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဖေဖော်၀ါရီလ ၁ရက်နေ့ နံနက် ၀၉း၀၀ နာရီ၌ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီး၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၀န်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီဥက္ကဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း ဦးဆောင်၍ နိုင်ငံခြားနှင့် ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးမှ ဆေးရုံအုပ်ကြီး၊ ဆရာ၀န်များ၊ ဆရာမများ၊ ၀န်ထမ်းများ စုစုပေါင်း၁၅၀ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ လှူဒါန်းပွဲအခန်းအနားတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၀န်ကြီးချုပ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး…
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၃၁.၁.၂၀၁၉
Invest Myanmar Summit ရဲ့ YRIC ပြခန်း အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
Invest Myanmar Summit ရဲ့ YRIC ပြခန်း အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ၂၅.၁.၂၀၁၉
PL Director and AuPL Director နှင့် Australian department of foreign affairs director တို့ရဲ့ office tour
PL Director နှင့် Australian department of foreign affairs director တို့ရဲ့ office tour ၂၅.၁.၂၀၁၉
YRIC 2/19 အစည်းအဝေး
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတည်ပြုမိန့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ YRIC 2/19 အစည်းအဝေး တွင်တင်ပြခဲ့သည့် လျောက်ထားလွှာများအပေါ်ဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်တွင် တွေ့ရှိရသည့်အားနဲချက်၊အားသာချက်များအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံအရာရှိများနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၄.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၄.၁.၂၀၁၉
DICA YANGON BRANCH OFFICE သို့ လာရောက်ကြသောဧည့်သည်များအတွက် COFFEE BAR လုပ်ပေးထား
Dica Yangon Branch Office သို့ လာရောက်ကြသောဧည့်သည်များအတွက် Coffee Bar လုပ်ပေးထား ပါတယ်။ Self Service စနစ်ဖြင့် အခမဲ့ သုံးဆောင်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ ၂၄.၁.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်​တိုင်းအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး ခဲ့ကြပါတယ်​။ ၂၃.၁.၂၀၁၉
Invest Myanmar Summit 2019 တွင် ပြခန်း ပါဝင်ပြသနိုင်ရေးဒုတိယအကြိမ် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း
Invest Myanmar Summit 2019 တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ပြခန်း ပါဝင်ပြသနိုင်ရေး ဒုတိယအကြိမ်ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း ၂၃.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏(၂/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ (၂/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း ၈ ခု နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း(၂)ခုတို့ကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂၃.၁.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၂၂.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၂.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၂၁.၁.၂၀၁၉
ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ စက်ရုံ(၄)ရုံသို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများ၏ အခက်အခဲများနှင့် လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ၁၈.၁.၂၀၁၉
(၂/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၌ (၂/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဌာနမှဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၇.၁.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နှင့် ကိုရီးယား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်လာစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း နှင့် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကိုရီးယား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရင်းနှီးစွာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ ကိုးရီးယား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၅၃ ဦး တို့ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ၁၆.၁.၂၀၁၉
Dica Yangon Branch Office သို့ လာရောက်ကြသောဧည့်သည်များအတွက် Coffee Bar လုပ်ပေးထား ပါတယ်။ Self Service စနစ်ဖြင့် အခမဲ့ သုံးဆောင်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ ၁၆.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်တင်အေးဟန် ဦး​ဆောင်​​သောအဖွဲ့ သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးသို့လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်​​ဆေးခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံကာလိုအပ်​သည်​များကို လမ်​းညွှန်​ဖြည့်ဆည်း ပေးခဲ့ပါတယ်… ၁၅.၁.၂၀၁၉
လုပ်ငန်းရှင်အား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြုမိန့်ပေးအပ်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်များအား ရန်​ကုန်​တိုင်​း​ဒေသကြီး ရင်​းနှီးမြှုပ်​နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့်များ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်… ၁၅.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၅.၁.၂၀၁၉
ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တိုင်းဦးစီးမှူးမှ တက်ရောက်
၁၄.၁.၂၀၁၉ ရက်နံနက် ၉ နာရီတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ခန်းမ(၃)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တိုင်းဦးစီးမှူးမှ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၄.၁.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၁၄.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၁.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၁၀.၁.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ၁၀.၁.၂၀၁၉
မီးဖွားခွင့်ယူမည့် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်းအား လက်ဆောင်ပေးအပ်ခြင်း
မီးဖွားခွင့်ယူမည့် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်းအား လက်ဆောင်ပေးအပ်ခြင်း ၂.၁.၂၀၁၉ ၂.၁.၂၀၁၉
Invest Myanmar Summit 2019 တွင် ပြခန်း ပါဝင်ပြသနိုင်ရေး ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း
Invest Myanmar Summit 2019 တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ပြခန်း ပါဝင်ပြသနိုင်ရေး ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း 9.1.2019
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်​များသည် ရန်ကုန်​တိုင်းအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံသူများ၏ တင်​ပြချက်​များအား ​တွေ့ဆုံ ​ဆွေး​နွေး ခဲ့ကြပါတယ်​။ ၉.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏(၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ (၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတည်ပြုမိန့်များကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၉.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၈.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၇.၁.၂၀၁၉
Law Firm များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း
Yangon Region Investment Talk event ကျင်းပရေးဆွေးနွေးခြင်း
Yangon Region Investment Talk event ကျင်းပရေးဆွေးနွေးခြင်း၇.၁.၂၀၁၉
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆောင်ရွက်ရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဆောင်ရွက်ရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၇.၁.၂၀၁၉
Discussion with investor for importing machinery equipmentsစက်ပစ္စည်းတင်သွင်းရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအားဆွေးနွေးခြင်း
စက်ပစ္စည်းတင်သွင်းရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် လာရောက်မေးမြန်းခြင်းအားဆွေးနွေး ကူညီပေးခြင်း၇.၁.၂၀၁၉
(၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနား
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၌ (၁/၂၀၁၉) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ ၁၁:၀၀မှ ၁၂:၀၀ အချိန်တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဌာနမှဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၇.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးခြင်း ၃.၁.၂၀၁၉
Yangon Region Investment Talk with Korea Investors ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေး ဆွေးနွေးခြင်း
Myanmar – Korea Chamber of Commerce မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် Yangon Region Investment Talk with Korea Investors ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေး ဆွေးနွေးခြင်း ၃.၁.၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးက အတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၃.၁.၂၀၁၉
Dica Yangon Region ၏ ယနေ့ပုံရိပ်များ ၃.၁.၂၀၁၉
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခြင်း ၂.၁.၂၀၁၉
OSS ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ လာရောက်မေးမြန်းခြင်းအားဖြေရှင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်။ ၂.၁.၂၀၁၉
နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်လွှာ နှင့် နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်များအားပေးအပ်ခဲ့
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးမှ ဝန်ထမ်းများအား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦး၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်လွှာ နှင့် နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင်များအား ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများက ပေးအပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာတင်ပြလာသော လုပ်ငန်းရှင်အား ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်​နှံမှု ကော်မတီ ဥက္ကဌကိုယ်စား အတွင်းရေးမှူးကအတည်ပြု မိန့် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်လွှာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများအားလုံးသို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်လွှာ Thank you DG
မြန်မာတိုင်းမ် သတင်းစာမှ ဦးအောင်နိုင်ဦးအား၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်း လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ထူးချွန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရွေးချယ်ဖော်ပြ
မြန်မာတိုင်းမ် သတင်းစာမှ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်နိုင်ဦးအား ၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်း လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ထူးချွန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ရွေးချယ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ Congratulation DG